Itti aanaan Pirezidaantii Naannoo Amaaraa haaraan muudama isaanii irratti maal jedhu? - BBC News Afaan Oromoo
Itti aanaan Pirezidaantii Naannoo Amaaraa haaraan muudama isaanii irratti maal jedhu?
Madda suuraa, Amhara Mass Media Agency FB
Itti aanaa pirezidaantii naannoo Amaaraa Dr Faantaa Maandafiroo
Dr Faantaa Maandafiroo yuunvarsiitii Finfinneetti barsiisaa fi qorataa yoo tahan naannoo Amaaraattis Hojii Gaggeessaa Olaanaa yaa'ii gorsitootaa tahuun tajaajilaa turan.
Kaleessa ammoo mana maree naannoo Amaaraan itti aanaa pirezidaantii tahuun muudamaniiru. Muudama isaanii boodas BBC waliin dhimma muudama isaanii irartti gaffiif deebii taasisaniiru.
Gumaacha akkamiin taasisa jettaniiti muudamicha kan fudhattan?
Dr Faantaa: Waan baay'ee gumaacha jedheen yaada. Sirna siyaasaa Itoophiyaa keessatti walakkaa jaarraa tokkoo kan tahuuf qonnaan bultootni Itoophiyaa giphii isaanii keessaa akkasumas haadholiin sabbata isaanii irraa hiikanii barsiisan hayyootaan dhiibamaa turaniiru. Mudannoo ture irraa ka'uun.
Kun ammoo imala keenya rakkoo keessa galcheera. Kanaaf ani akka dhuunfaakootti kana booda siyaasa Itoophiyaa ala taa;'ee qeequu qofaan sirreessuun danda'ama jedhee hin yaadu.
Keessa gallee namoota siyaasaa dabalatee gargaaruun jijjiiruun ni danda'ama jedheen amana jedhan.
Barnoonnis koos jalqaba bulchiinsa uummataa, digirii 2ffaas 'local and regional development' kan jedhuun xumure. Digirii 3ffaas qorannoo misoomaa [ developmental studies] kan jedhuun xumure. Muuxannoon barsiisummaa, qorannoowwaniifi kaan keessatti dabarse hojiikoo ammaa waliin walitti hidhaminsa waan qabuuf waan guddaan gumaacha amantaa jedhun qaba.
Dr Faantaa Maandafroo Itti Aaanaa Pirezidaantii naannoo Amaaraa tahuun muudaman
Nama siytaasaa tahuufi ogummaa barnootaan tajaajiluun garaagarummaa qaba namoota jedhaniif maal jettu?
Dr Faantaa፡ Ani kaniin dhufe ogummaan baradheen tajaajiluufidha. Aango siyaasaa fudhachuuf qofa miti.
Rakkoowwan bu'uuraa siyaasa Itoophiyaa fi naannoo Amaaraa mudatan duubatti deebinee yoo ilaalle tajaajilli uummataa quubsaa tahe dhibamuu isaati.
Kana deeggaruuf ammoo namootni siyaasaa qofaa isaanii tahuun miti. Namoota ogummaa kanaan baratan qabaachuun barbaachisaadha.
Nama siyaasaa tahuufi ogummaa [acadamician] tahuun garaagara. Garuu nama barnootasaan tajaajilu tahuu jechuun siyaasa hin beeku jechuu miti.
Jireenyi keenyas hawwaasuma kana keessa waan taheef nama akka keenyaa ogummaa kanaa fi saayinsii siyaasaa barate dhiisii namni ogummicha irraa fagoo jiru iyyuu ejjennoo siyaasaa mataa isaa ni qabaata. Garaagarummaan isaa aangoo siyaasaa of harkaa qabaachuufi dhiisuu tahuu mala.
Ani ammoo saayinsii siyaasaas baradheera waan taheef siyaasa jechuun maal jechuu akka tahe sirriittan beekan.
Muudama gaggeeffame irratti miseensotni mana maree mormii qaban kaasaniiru. Naannicha irraa ka'uun gara federaalaatti namootni fudhatamuun naannicha dadhabsiisuudha jechuun kan kaasan jiru. Ilaalchi akka dhuunfaatti qabdan maali?
Dr Faantaa፡ Waan nama sodaachisu natti hin mul'anne. Obbolootni keenya gara federaalaa deeman kanneen asitti dhalatanii asumatti uummata isaanii tajaajilaa kanneen turanidha.
Gara biyyaalessaa deeman jechuun siyaasa naannoo kanaa gonkumaa dagatanii deemu jechuu miti.
Siyaasni naannoo kan biyaalessaa keessatti bakka bu'insa akka qabaatu fi faayidaawwan siyaasaa, dinagdee fi hawwasummaa akka jiraatu taasisuudha.
Nuyi ammoo namoota samii irraa dhufne miti. Ammas namoota lama qofatu Finfinnee irraa dhufe. Kanaaf rakkoo tahee natti hin mul'anne.
Namoota yaada isaanii kennanis hammina ykn ilaalcha hamaa biraanidha jedhee maqaa balleessuu hin barbaadu. Siyaasni biyya kanaa fuulduratti akka deemu yoo barbaadames maqa balleessii akkasii keessaa bahuu qabna.
Dr Faantaan gaaffi fi rakkina uummatni naannchaa kaasaa ture deebisuuf jalqaba hunduma isaa miira tasgabbiin akka ilaalnii fi mariin bifa uummata naannchaa fayyaduun akka hojjetanis himaniiru.
Hojjettoota mootummaa jajjabeessuub kaka'umsaan damee hundumaan uummata isaanii akka tajaajilan gochuuf akka hojjetanis himaniiru.
Manni Maree Naannoo Amaaraa wal gahii ariifachiisaa taa'een muudama garaagaraa raggaasiseera